November 2021 – Page2– Cele News TV
ဖတ္မိသူတိုင္း ရင္ထဲမွာထပ္တူ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရတဲ့ ခင္ပြန္းျဖစ္သူအတြက္ သူမဆုေတာင္းေတြမျပည့္ခဲ့ေၾကာင္း ရင္ဖြင့္လာတဲ့ ေငြတီဦး
ဖတ္မိသူတိုင္း ရင္ထဲမွာထပ္တူ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရတဲ့ ခင္ပြန္းျဖစ္သူအတြက္ သူမဆုေတာင္းေတြမျပည့္ခဲ့ေၾကာင္း ရင္ဖြင့္လာတဲ့ ေငြတီဦး ပရိသတ္ႀကီးေရ ႏိုင္ငံေက်ာ္ မင္းသားေခ်ာတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ေျပတီဦးရဲ႕ ညီမခ်စ္သူ ေငြတီဦး ရဲ႕ခင္ပြန္းျဖစ္သူကေတာ့ ကိုဗစ္ေရာဂါကူးစက္ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ကိုဗစ္ေနာက္ဆက္တြဲကို ေလးလေက်ာ္ၾကာေအာင္ ခံစားခဲ့ရပါတယ္။ ကံမေကာင္းစြာနဲ႔ပဲ ခ်စ္ရတဲ့ဇနီးနဲ႔ မိသားစုကိုႏိုဝင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔မွာခြဲခြာသြားခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေငြတီဦး ရဲ႕ခင္ပြန္းကြယ္လြန္သြားခဲ့တဲ့ႏိုဝင္ဘာလကေတာ့ […]
ဒူဘိုင်းနိုင်ငံမှာ အရမ်း လန်းနေတဲ့ ရွှေအိမ်စည်
November 29, 2021 100million 0
ရွှေအိမ်စည်ကတော့ ပြေပြစ်လှပတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားနဲ့အတူ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အလှတရားတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။အလှမယ်တစ်ဦးအဖြစ် ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကို စတင်ရရှိခဲ့တဲ့ ရွှေအိမ်စည်က နိုင်ငံတကာအလှမယ်ပြိုင်ပွဲတွေအထိ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါ တယ် ။ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာပါ ထူးချွန်တဲ့အိမ်စည်က နောက်ပိုင်းမှာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေနဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ ဆက်တိုက်ရိုက်ကူးလာရတာပါ ။ ရွှေအိမ်စည်ကတော့ အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့အောင်မြင်မှုတွေကို […]
နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်ပြောပြလာတဲ့ မနာလို မူအ ကြောင်း
သရုပ်ဆောင်နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်ပြောပြလာတဲ့မနာလိုမူအကြောင်းသိကောင်းစရာများ ပရိတ်သတ်ကြီးရေ၊အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်သရုပ်ဆောင်နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်ကမနာလိုမူအကြောင် းသိကောင်းစရာများကိုအခုလိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်နော်။ မနာလိုမှု၊ကိုယ့်ကိုလူတစ်ယောက်ကအကြောင်းမရှိ တိုက်ခိုက်​​ပြီ၊အ​ကြောင်းမဲ့မကောင်းမြင်စိတ်ဝင်ပြီဆိုရင်ကိုယ့်ကိုအားကျနေတာမျိုးကိုယ့်လိုဖြစ်ချင်တာမျိုးတွေကသူ့ရဲ့မသိစိတ်ထဲမှာခိုအောင်းနေလို့ပါပဲ။ ကိုယ်ကအလုပ်နဲ့ကိုယ်ရှုပ်နေပေမယ့်သူတို့က အလုပ်ရှုပ်ခံပြီးကိုယ့်ကိုစောင့်ကြည့်နေလိမ့်မယ်၊ကိုယ်ကအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့နေပေမယ့်လည်းသူတို့ကကိုယ့်ဒုက္ခကိုယ်ရှာပြီးပူလောင်နေလိမ့်မယ်၊ကိုယ်ကအဲ့ဒီပူလောင်မှုကိုလက်မခံဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ မနာလိုမှုဆိုတာအဲ့ဒီလိုပါပဲ၊ကိုယ်တိုင်ကသာသတိမထားမိတာကိုယ့်ကိုသတိထားပေးနေတဲ့လူတစ်စုကတော့မနာလိုမှုအပူအလောင်တွေကိုရင်ဝယ်ပိုက်ထားကြတယ်၊ဒီလိုလူတွေနဲ့ကြုံတွေ့ဖြစ်တဲ့အခါ သဘောထားကြီးစွာနားလည်ပေးလိုက်ပါ၊နားလည်ပေးဖို့အတော်ခက်ခဲတာမျိူးရှိပါလိမ့်မယ်။ အတတ်နိုင်ဆုံးအဲ့လိုလူတွေနဲ့မပက်သက်ပဲရှောင်လိုက်ပါ၊ရှောင်နေရင်းမှအဆိုးဆုံးလွန်လာရင်တော့ သူတို့နဲ့တန်တဲ့တုံပြန်မှုကိုပေးသင့်ရင်ပေးရမှာပဲ၊ကိုယ့်ကိုအားကျနေလို့ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ဆီမှာတည်ရှိနေတဲ့အရာတစ်ခုခုကသူတို့သိပ်လိုချင်နေတဲ့အရာဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ တခါတရံသူတို့ကိုဘေးမှာကောင်းသောအကြံနဲ့ဆုံးမဖို့လူမရှိလို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊ကြီးပြင်းလာကတည်းကပါလာတဲ့စိတ်ဓာတ်ဗီဇနာခံတတ်မှုတွေနဲ့လည်းဆိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်၊စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးများအတွက်ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Credit klcelenews သရုပ်ဆောင်နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်ပြောပြလာတဲ့မနာလိုမူအကြောင်းသိကောင်းစရာများပရိတ်သတ်ကြီးရေ၊အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်သရုပ်ဆောင်နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်ကမနာလိုမူအကြောင်းသိကောင်းစရာများကိုအခုလိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်နော်။မနာလိုမှု၊ကိုယ့်ကိုလူတစ်ယောက်ကအကြောင်းမရှိ တိုက်ခိုက်​​ပြီ၊အ​ကြောင်းမဲ့မကောင်းမြင်စိတ်ဝင်ပြီဆိုရင်ကိုယ့်ကိုအားကျနေတာမျိုးကိုယ့်လိုဖြစ်ချင်တာမျိုးတွေကသူ့ရဲ့မသိစိတ်ထဲမှာခိုအောင်းနေလို့ပါပဲ။ကိုယ်ကအလုပ်နဲ့ကိုယ်ရှုပ်နေပေမယ့်သူတို့က အလုပ်ရှုပ်ခံပြီးကိုယ့်ကိုစောင့်ကြည့်နေလိမ့်မယ်၊ကိုယ်ကအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့နေပေမယ့်လည်းသူတို့ကကိုယ့်ဒုက္ခကိုယ်ရှာပြီးပူလောင်နေလိမ့်မယ်၊ကိုယ်ကအဲ့ဒီပူလောင်မှုကိုလက်မခံဖို့အရေးကြီးပါတယ်။မနာလိုမှုဆိုတာအဲ့ဒီလိုပါပဲ၊ကိုယ်တိုင်ကသာသတိမထားမိတာကိုယ့်ကိုသတိထားပေးနေတဲ့လူတစ်စုကတော့မနာလိုမှုအပူအလောင်တွေကိုရင်ဝယ်ပိုက်ထားကြတယ်၊ဒီလိုလူတွေနဲ့ကြုံတွေ့ဖြစ်တဲ့အခါ သဘောထားကြီးစွာနားလည်ပေးလိုက်ပါ၊နားလည်ပေးဖို့အတော်ခက်ခဲတာမျိူးရှိပါလိမ့်မယ်။အတတ်နိုင်ဆုံးအဲ့လိုလူတွေနဲ့မပက်သက်ပဲရှောင်လိုက်ပါ၊ရှောင်နေရင်းမှအဆိုးဆုံးလွန်လာရင်တော့ သူတို့နဲ့တန်တဲ့တုံပြန်မှုကိုပေးသင့်ရင်ပေးရမှာပဲ၊ကိုယ့်ကိုအားကျနေလို့ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ဆီမှာတည်ရှိနေတဲ့အရာတစ်ခုခုကသူတို့သိပ်လိုချင်နေတဲ့အရာဖြစ်နေလို့ပါပဲ။တခါတရံသူတို့ကိုဘေးမှာကောင်းသောအကြံနဲ့ဆုံးမဖို့လူမရှိလို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊ကြီးပြင်းလာကတည်းကပါလာတဲ့စိတ်ဓာတ်ဗီဇနာခံတတ်မှုတွေနဲ့လည်းဆိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်၊စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးများအတွက်ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။Credit klcelenews klcelenews
အရမ်းချစ်ရတဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို လွမ်းတဲ့အကြောင်း ဝမ်းနည်းစွာရင်ဖွင့်လာတဲ့တဲ့ ငွေတီဦး စာများ
ခင်ပွန်းဖြစ်သူကိုလွမ်းတဲ့အကြောင်း၀မ်းနည်းစွာရင်ဖွင့်လာတဲ့ သရုပ်ဆောင်ပြေတီဦးရဲ့အမဖြစ်သူငွေတီဦး သရုပ်ဆောင်ပြေတီဦးရဲ့အမဖြစ်သူငွေတီဦးကတော့ခင်ပွန်းဖြစ်သူကိုလွမ်းတဲ့ အကြောင်းလေးအခုလို၀မ်းနည်းစွာရင်ဖွင့်လာခဲ့ပါတယ်နော်။ လွမ်းပီးခံစားကျန်ရစ်ခဲ့မှာကိုမမြင်ရက်တော့လောက်အောင်သူ့ကိုအရင်ပေးသွားချင်မိခဲ့တဲ့ကိုယ်ကပိုချစ်ခဲ့တာလား၊ကိုယ်ဝေဒနာခံစားရမှာမဖြစ်စေချင်လို့သူတစ်ယောက်ပဲနာကြဉ်နေတဲ့ကြားက ကျေနပ်တယ်ပျော်တယ်ဆ်ိုတဲ့သူကပိုချစ်ခဲ့တာလား။ တစ်ချို့သူတွေလဲကျွန်မလိုပဲတွေးမိကြမှာပါ၊အရင်ထွက်သွားခွင့်ရတဲ့သူကကိုယ်ပဲဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာမျိုး၊ကျွန်မလေကျန်ခဲ့ရမှာကိုသေမှာထက်သိပ်ကြောက်တာ၊အရင်သေသွားတာကိုယ်ပဲဖြစ်ခွင့်ရချင်တာ၊ဒါပေမယ့်ဆေးရုံပတ်လမ်းမှာလမ်းလျှောက်နေရင်းရုတ်တရက်ခံစားချက်တစ်ခုဝင်လာတယ်။ ကျန်ခဲ့ရတဲ့နာကြဉ်မှုကိုသူ့ကိုမခံစားစေချင်တော့ပဲ လွတ်မြောက်ငြိမ်းအေးသွားတာသူဖြစ်လဲကောင်းတာပါပဲလေဆိုတဲ့ခံစားချက်၊ကျန်ခဲ့ရင် အစစအရာရာအဆင်မပြေမှာစိုးတဲ့အထိစိတ်မချတဲ့ ခံစားချက်၊ချန်ထားရစ်ခံရမယ့်နေရာကိုရင်နာနာနဲ့ ကြည်ဖြူစွာခံယူလိုက်ချင်တဲ့ခံစားချက်။ ကိုယ်သိပ်ကြောက်တဲ့ကျန်ခဲ့ရမယ့်ဝေဒနာကိုသူမခံစားရပါစေနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကရုတ်တရက်ဝင်လာတာ၊အတ္တကိုခွာချမှမြင်ရမယ့်မေတ္တာနဲ့နွယ်တဲ့အချစ်မျိုးကိုရုတ်တရက်ခံစားခဲ့ရတယ်၊နာကြဉ်မှုတွေကနေသူလွတ်မြောက်သွားပါစေ၊ဒီ့ထက်ပိုအေးချမ်းမယ့်ဘဝမှာပိုပီးကျန်းမာသန်စွမ်းမယ့်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အသစ်တဖန်ပြန်စနိုင်ပါစေ။ ကိုယ့်ထက်ပိုချစ်နိုင်မယ့်သူနဲ့ဆုံပါစေ၊ပိုချစ်တဲ့သူ ကိုယ်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ခဲ့တာမှားသွားမှန်းအရာရာနောက်ကျပြီးမှသိခဲ့ရတယ်၊ကိုကပိုချစ်တာလို့သူအမြဲပြောတုန်းကကိုယ်ကသိပ်မယုံခဲ့မိဘူး၊ကိုယ်နဲ့သူနဲ့ အကြောင်းသိခဲ့သူတွေအထူးသဖြင့်အမေပေါ့လေ၊ သူကသမီးကိုပိုချစ်တာတဲ့။ သူငယ်ချင်းတွေကငွေတီရယ်၊သူပိုချစ်တာငါတို့တောင်သိတယ်တဲ့၊သူတို့ပြောမှတဖြေးဖြေးလက်ခံလာတယ်၊နိုဝင်ဘာကိုနှုတ်ဆက်ရတော့မယ်၊ကိုရယ်၊အမှတ်ရစရာတွေအရမ်းများတဲ့နိုဝင်ဘာ၊၁၁၊၁၁၊၁၁မှာလက်မှတ်ထိုးတယ်၊နိုဝင်ဘာမှာPreWeddingတွေရိုက်တယ်။ ၂၀၁၆နိုဝင်ဘာမှာMediacorpနဲ့Collaborationလုပ်ပီးပွဲတွေလုပ်တယ်၊ဒီနေ့၂၉ နိုဝင်ဘာ၂၀၁၆မှာ အိမ်စဆောက်ဖို့ပန္နက်တင်မြေသန့်မင်္ဂလာလုပ်တယ်၊ဒီနိုဝင်ဘာမှာပဲကိုကထားခဲ့တယ်၊Anniversaryမှီအောင်များဒီရောဂါဆိုးကို၄လလောက်တောင့်ခံနေခဲ့တာလား။ ဒေါသစိတ်နည်းပီးသီးခံစိတ်ရှည်တတ်တဲ့ကို့အကျင့်ကြောင့်တခါမှကြီးကြီးမားမားရန်မဖြစ်ခဲ့ဘူးသလို၊ချစ်ကစိတ်ဆိုးလို့စကားမာမာပြောမိရင်တောင်စိတ်မဆိုးဘဲညရောက်တာနဲ့လက်မောင်းပေါ်ခေါင်းကို အတင်းဆွဲတင်ပီးကျောကိုပုတ်သိပ်ခဲ့တာ။ အရာရာဟာပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်ကျေနပ်စရာ၊လွမ်းစရာတွေကြီးပဲ၊လူ့ဘဝကိုခနလာလည်တဲ့ကိုနဲ့ဆုံခွင့်ရခဲ့တာအချ်ိန်အတိုင်းအတာအရနည်းတယ်ဆိုပေမယ့်တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်အကောင်းဆုံးဖြည့်စည်းပေးဆပ်ခွင့်ရခဲ့တာအကောင်းဆုံးဆုလာဘ်ပဲ။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ဒဏ်ရာတွေမပေးခဲ့ကြတာ၊တစ်ယောက်လိုအပ်ချက်ကိုတစ်ယောက်ဖြည့်စည်းပီးအပစ်အနာအဆာတွေကိုခွင့်လွှတ်ခဲ့ကြတာ၊ရခဲ့ဘူးတဲ့ချိုမြိန်တဲ့အတိတ်ကိုရင်ထဲမှာမြှုပ်နှံပီးရခဲ့သလောက်ကိုကျေနပ်ရောင့်ရဲတဲ့စိတ်ကိုမွေးမြူပီး […]
ယခုအချိန်ထိ ကတိအတိုင်း Game Streaming လုပ်တာကိုလုံးဝ ရပ်တန့်ထားသည့် နာမည်ကြီး Streamer များကဘယ်သူတွေများလဲ
ယခုအချိန်ထိကတိအတိုင်းGame Streamingလုပ်တာကို ရပ်တန့်ထားသည့်နာမည်ကြီးStreamerများ ဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့ကစလို့စကစအာဏာသိမ်းခဲ့တာဟာယနေ့ထက်ထိပါပဲ၊တော်လှန်ရေးအတွင်းအသက်ပေါင်းများစွာဆုံးရှူံးရတဲ့အပြင်နိုင်ငံခေါင်ဆောင်များနဲ့ပြည်သူများကိုလဲမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပါတယ်နော်။ ပရိတ်သတ်ကြီးရေ၊အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်တော့ယခုအချိန်ထိကတိအတိုင်းGameStreamingလုပ်တာ ကိုရပ်တန့်ထားတဲ့နာမည်ကြီးStreamerများကိုဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ သူတို့ကတော့အဆိုတော်လွမ် းပိုင်၊ အဆိုတော် Bobb ySoxer ထက်ထက် ၊Taka၊Moni caနဲ့မေဇွန်ဇွန်ထက်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်၊သူတို့ရဲ့ပုံရိပ်များကိုစာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးများအတွက်ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Zawgyi vision ဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့ကစလို့စကစအာဏာသိမ်းခဲ့တာ ဟာယနေ့ထက်ထိပါပဲ၊တော်လှန်ရေးအတွင်းအသက်ပေါင်းများစွာဆုံးရှူံးရတဲ့အပြင်နိုင်ငံခေါင်ဆောင်များနဲ့ပြည်သူများကိုလဲမတရားဖမ်းဆီးထိန် းသိမ်းထ ားပါတယ်နော်။ ပရိတ်သတ်ကြီးရေ၊အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်တော့ယခုအချိန်ထိကတိအတိုင်းGameStreamingလုပ်တာကိုရပ်တန့်ထားတဲ့နာမည်ကြီးStreamerများကိုဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ သူတို့ကတော့အဆိုတော်လွမ်းပိုင်၊အဆိုတော်BobbySoxerထက်ထက်၊Taka၊Monicaနဲ့မေဇွန်ဇွန်ထက်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ် ၊သူတို့ရဲ့ပုံရိပ်များကိုစာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးများအတွက်ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Credit klcelenews […]
ယမန်နေ့ နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့ဟာ ချင်းတိုင်းရင်းသား အဆိုတော် Benjamin Sum ရဲ့ မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။Benjamin Sum ဟာ သူ့ရဲ့မွေးနေ့ အလှူအဖြစ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊ လှည်းကူးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ ဝက်အင်းပေါက်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာ ဘက်စုံသုံးခန်းမ တည်ဆောက်ရန်အတွက် အလှူငွေ ကျပ် ၂ သိန်းတိတိ လှူဒါန်းလိုက်တယ်လို့ […]
စွယ်စုံရအနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဒါရိုက်တာ ကိုပေါက်ကတော့ ပြည်သူ့ပရိသတ်တွေ လေးစားချစ်ခင်မှုတွေကို အပြည့်အဝ ရရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကိုပေါက်ဟာ ဖေဖော်ဝါရီ (၁)ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကတည်းက လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ တက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့ပြီး ပြည်သူတွေနဲ့အတူတစ်သားတည်း ရပ်တည်ပေးခဲ့တာပါ။ ယင်းနောက်မှာတော့ ၅၀၅(က)ဖြင့် အမှုစွဲဆိုခံပြီး ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခံရမှုကြောင့် တိမ်းရှောင်နေရင်းကနေ လက်ရှိမှာ လွတ်မြောက်နယ်မြေကို ရောက်ရှိနေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တရားဘက်ကနေရပ်တည်ဖို့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အရာတွေနဲ့ […]
ပရိသတ်ကြီးရေ အခုလတ်တလောမှာ သရုပ်ဆောင် စည်သူဝင်းနဲ့ ယွန်းယွန်းတို့ ဖောက်ပြန်တဲ့ သတင်းတွေ အရမ်းကို ပျံ့နှံ့နေပါတယ်နော်။ စည်သူဝင်းဟာ ချစ်သူရှိရက်နဲ့ ယွန်းယွန်းကို ချစ်ရေးဆိုခဲ့တာကြောင့် အခုလို ပြသနာတွေဖြစ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုတော့ စည်သူဝင်းရဲ့လက်ရှိ ချစ်သူကောင်မလေးက ထုတ်ပြောပြလာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စဟာ လတ်တလော လူမှုကွန်ယက်ပေါ်တွင် အတော်လေးကို […]
ရင္ေသြးေလးမ်ားေဂဟာအေဆာက္အအုံအသစ္ႀကီး ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့လို႔ဝမ္းသာမ်က္ရည္မ်ားက်ေနတဲ့ ပရဟိတမင္းသမီး ခိုင္ႏွင္းေဝ The post ရင္ေသြးေလးမ်ားေဂဟာအေဆာက္အအုံအသစ္ႀကီး ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့လို႔ဝမ္းသာမ်က္ရည္မ်ားက်ေနတဲ့ ပရဟိတမင္းသမီး ခိုင္ႏွင္းေဝ appeared first on Celebrity Corner. klcelenews
မိခင္ျဖစ္သူရဲ႕ ေမြးေန႔ရက္ျမတ္ေလးမွာ ၾကည္ႏူးစရာပုံရိပ္ေလးေတြနဲ႔အတူ ေမြးေန႔ဆုေတာင္းစကားေလး ဆိုထားတဲ့ စိုးျပည့္သဇင္ The post မိခင္ျဖစ္သူရဲ႕ ေမြးေန႔ရက္ျမတ္ေလးမွာ ၾကည္ႏူးစရာပုံရိပ္ေလးေတြနဲ႔အတူ ေမြးေန႔ဆုေတာင္းစကားေလး ဆိုထားတဲ့ စိုးျပည့္သဇင္ appeared first on Celebrity Corner. klcelenews